SoundPeats Q30, mamakafaka ny audio ambony izahay amin'ny vidiny mirary | Vaovao momba ny gadget
SoundPeats Q30, mamakafaka ny audio ambony izahay amin'ny vidiny mirary
Ny headphones tsy misy tariby tanteraka dia efa zavatra demokratika be, lavitra ny zava-nitranga taloha, izay vao hitanay ireo toetra ireo tamin'ny fitaovana lafo vidy kokoa sy mpihaino kely dia kely. Androany dia eo am-pelatanantsika (na ny marimarina kokoa any an-tsofintsika) ny SoundPeats Q30, headphone tsy misy tariby miaraka amin'ny zavatra maro azo atao ary vidiny tena manintona.
Toy ny mahazatra, handeha hamakafaka ireo lafiny mahaliana indrindra amin'ireo écouteur ireo izahay mba hahazoana tombony betsaka amin'ny volantsika ary fantaro raha miatrika headset amin'ny refy isika. Ka mijanona miaraka aminay toy ny mahazatra, ny hevitra tsara indrindra dia ao amin'ny Actualidad Gadget.
1 Famoronana headphone
1.1 Votoatin'ny fonosana
3 Vonona amin'ny toe-javatra rehetra
Manomboka amin'ny mahazatra izahay, ny endriny amin'ny saina. Eto i SundPeats dia tsy te hanavao be loatra amin'ny alàlan'ny fisafidianana endrika izay misy ankehitriny ary izany dia miantoka ny fahombiazanao farafaharatsiny. Ireo headphones ireo dia manana rafitra ao an-tsofina miaraka amin'ny farango ivelany mahazatra izay hifanaraka amin'ny valin'ny sofintsika (tsy amin'ny endrika clamp) ary hisoroka tanteraka azy ireo tsy ho rendrika noho ny fanaraha-maso. Ity endri-javatra ity, ankoatry ny hafa, dia mahatonga ny SoundPeats Q30 headphones mety indrindra amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena mihaino ny mozika ankafizintsika, ohatra.
Headphone SoundPeats Q30
Adapter robber x5
Clip clip sy clamp
Kitapo mitondra hoditra sandoka
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa (fiteny 5, ao anatin'izany ny Espaniôla)
Ireo kabary roa dia ampifandraisin'ny tariby manify manelingelina ny bokotra fanaraha-maso multimedia ihany. Ho fanampin'izany, hanana kitapo isika izay hanisy tadivavarana enina hatramin'ny enina ary tadivavarana folo azo takalo mba hahafahantsika mahazo aina miaraka amin'izy ireo saika amin'ny toe-javatra rehetra. Ireo headphones ireo dia misy refy amin'ny ankapobeny 63,5 x 2,5 x 3,2 centimetatra, na dia maivana aza izy ireo dia miatrika isika 13,6 grama fotsiny ny lanjany.
Zava-dehibe ihany koa ny hardware, ary amin'ny headphones ny zavatra voalohany, tsy isalasalana, dia ny kalitaon'ny audio. SoundPeats, na dia manome vokatra mora be aza izy ity, dia manana rafitra Aptx, ilay codec mifanaraka amin'ny feo avo lenta, noho izany dia mampiasa chipset Bluetooth kinova CSR8645 4.1 izay hanolotra famindrana angona sy fandaniana ambany. Izany rehetra izany dia atambatra amin'ireo mpamily enina milimetatra, raha fintinina, ny feo dia mety ary manana kalitao ampy raha raisina ny vidin'ny fitaovana, sNa dia tsy miankina amin'ny fenitry ny safidy hafa toa an'i JayBird aza izany dia tadidio fa dimy heny eo ho eo ny vidiny.
Ny fizakan-tena dia manan-danja tokoa amin'ny vokatra tsy misy tariby tahaka ity iray ity. Ankafizinay hatramin'ny Ora adiresy 8 na playback mozika (Miovaova ny fotoana an-tsehatra arakaraka ny haavon'ny volavola sy ny atiny audio, voamarina). Ireo kapila tsy misy tariby ireo koa dia manana fotoana fiomanana hatramin'ny 100 ora amin'ny fiampangana adiny iray sy sasany. Ity fiampangana ity dia atao amin'ny alàlan'ny tariby microUSB izay tafiditra ao anaty atiny fonosana. Azo antoka, tsara ny fizakantena, manakaiky ny adiny valo izay ampanantenain'i SoundPeats, andao lazaina fa somary ambany kokoa izy io, saingy mihoatra ny fihaonana fotsiny amin'ny fampiasana isan'andro.
Vonona amin'ny toe-javatra rehetra
Lafin-javatra iray hafa izay miavaka ireo headphone ireo dia amin'ny fahaizany manokana. Hanombohana manana fanoherana ny rano isika IPX6 izany dia hahafahantsika manao fanatanjahan-tena miaraka amin'izy ireo tsy misy tahotra ny handrava azy ireo noho ny hatsembohana, izay tsy mahatonga azy ireo hilentika, fa mahatohitra tsara hilalao fanatanjahan-tena amin'izy ireo nefa tsy misy tahotra. Teboka iray mba hanasongadinana an'ireo écouteur ireo. Izahay dia nisedra ny fahaizan'izy ireo nanao fanatanjahantena ary afaka milaza izahay fa mihazona tsara ny sofina izy ireo nefa tsy misy olana., tsy mbola niaina fatiantoka audio koa izahay.
Ny mampiavaka ny fitaovana dia ny fananan'izy ireo andriamby amin'ny faritra ivelany izany dia hahafahantsika mampivondrona azy ireo, mamadika azy ireo ho karazana rojo, izay tena ahazoana aina amin'ny headphones toy izao hahafahana mifandimby ny fanesorana sy ny fampidirana nefa tsy mila tahirizina ao anaty kitapo indray, ary ny tena zava-dehibe dia tsy misy tahotra very azy ireo. Hampiasa antsika matetika kokoa izy ireo, napetrakay ihany koa ny andrana ary milamina ary mihoatra ny ampy hitazomana ny headset milamina tsara.
Izahay dia nisedra matetika ireo SoundPeats Q30 ireo ary ny tena izy dia manolotra feo tsara mihoatra ny ankamaroan'ny head-in-sofina amin'ity sokajy ity izy, indrindra raha ny momba ny headphones tsy misy tariby. Ny sisa amin'ireo fizarana amin'ny resaka fahaiza-manao toa ny andriamby sy ny tahony ho an'ny fanatanjahan-tena dia manintona iray hafa indray rehefa mahazo ity fitaovana ity, azo alaina amin'ny Amazon avy amin'ny 22,29 euro.
Azo antoka fa toa fividianana lojika izany raha mitady fomba voalohany amin'ny fitaovana misy ireto toetra ireto ianao, Tsy ho afaka hahazo bebe kokoa noho ny kely ianao, amin'ny fiheverana ankoatry ny zavatra hafa ny kalitaon'ny audio sy ny fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » SoundPeats Q30, mamakafaka ny audio ambony izahay amin'ny vidiny mirary
Unsubscriber, ny fomba tsotra indrindra hanafoanana ny spam
Android Wear dia hanova ny anarany hoe Wear OS